Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Lufthansa na-agbakwunye ụgbọ elu Airbus A350-900 ọhụrụ anọ n'ime ụgbọ mmiri
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
A na-eme atụmatụ na Airbus 'A350-900 ga-eji ụdị akara Lufthansa banye ọrụ site na ọkara mbụ nke 2022, na-ewusi onyinye adịchaghị nke ụgbọ elu ise.
Lufthansa Group bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta mmezi maka ụgbọ elu ogologo anọ ọzọ nke Airbus A350-900.
Ụgbọ elu na -enye nnukwu nkwado na nkwado dị ukwuu site na pasent 30 mmanụ na nchekwa CO2.
Lufthansa Group na-ezube ibuga ụgbọ elu Airbus A350-900 ọhụrụ site na ọkara mbụ nke 2022.
The Lutù Lufthansa na-eme ngwa ngwa ka ọgbara ọhụrụ nke ụgbọ mmiri ya dị ogologo. Otu a bịanyere aka n'akwụkwọ mgbazinye ụgbọ elu anọ kacha ọhụrụ na mmanụ ụgbọ elu Airbus A350-900 na ndị na-ere ahịa Avolon, SMBC Aviation Capital Ltd. na Goshawk. N'ihi nke a, ụgbọ mmiri A350 nke otu ga -eto ruo ụgbọ elu 21 na mbido 2022.
The AirbusA350-900 ga-eji ụdị akara Lufthansa banye ọrụ site na ọkara mbụ nke 2022, na-ewusi onyinye adịchaghị nke ụgbọ elu ise.
Dr. Detlef Kayser, onye otu ndị isi oche Deutsche Lufthansa AG, kwuru, sị:
“Airbus A350 bụ otu n'ime ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ nke oge anyị. Mmanụ na-arụ ọrụ nke ukwuu, dị nwayọ ma dịkwa oke ọnụ karịa ndị bu ya ụzọ. Ndị ahịa anyị nwere ekele maka ọ bụghị naanị nkwado kamakwa ahụmịhe ụgbọ elu kacha elu na ụgbọ elu a. Nkwekọrịta mgbazinye ego na -enye anyị ohere ịdị na -agbanwe agbanwe na atụmatụ ụgbọ mmiri ma na -eji ohere ahịa pụrụ iche nke ọma eme ihe. ”
Ejima-igwe Airbus Ụgbọ elu A350-900 na-eri naanị ihe dị ka lita 2.5 nke kerosin n'otu onye njem n'ime kilomita 100 ọ bụla na-efe. Nke ahụ dị ihe dị ka pasent 30 dị ala karịa ndị bu ha ụzọ, na -enwekwa mmetụta dị mma na akara ukwu carbon. Ụgbọ elu ahụ ga-eji dochie anya ụgbọ elu nwere ogologo injin anọ sitere na ezinụlọ Airbus A340. Ka ọ na-erule afọ iri, a na-atụ anya na ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu injin anọ n'ime ụgbọ mmiri ogologo ogologo n'ozuzu ya ga-agbada n'okpuru pasent 15. Tupu nsogbu ahụ, òkè ya dị ihe dịka pasenti iri ise.
Ọzọkwa, ụgbọ elu ọhụrụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma ga-ebelata ọnụ ahịa ọrụ ihe ruru pasentị iri na ise ma e jiri ya tụnyere ụdị ha ga-anọchi.
Dị ka akụkụ nke mmemme mmụba ụgbọ mmiri ya zuru oke, ogologo oge, Lutù Lufthansa ga-ebuga ngụkọta nke ụgbọ elu dị mkpụmkpụ, ọkara na ogologo 177 n'ime afọ iri a.
Robert Charles ekwu, sị:
October 6, 2021 na 07: 33
Airbus A350 bụ ụgbọ elu ogologo oge kacha agba ọhụụ na gburugburu ebe obibi. Lufthansa kwuru na ya ekwenyela ịgbazite ụgbọ elu ogologo ụgbọ elu anọ ọhụrụ nke Airbus A350-900, na-eburu ụgbọ elu ọhụụ hapụrụ na-enweghị ụlọ.